भोलीबाट खुल्दै चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ, कति आवेदन दिने ? कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
Nepal Online Patrika आर्थिक भोलीबाट खुल्दै चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओ, कति आवेदन दिने ? कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं। चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले भोली पुस २४ गतेबाट साधारण शेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्देैछ । कम्पनीले १८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ४० हजार ९१० कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्ने लागेको हो ।
यस अघि पहिलो चरणमा कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढीको आईपीओ निष्काशन गरिसकेको छ । कम्पनीको आइपीओमा पुस २८ गते सम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आइपीओपछि कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
अहिले आइपीओमा आवेदन दिने आवेदकको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । यस अघि मात्र आइपीओ निष्काशन गरेको प्रभू लाइफमा १० लाख ४० हजार हारहारीको आवेदन परेको थियो । भोलीबाट आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको चन्द्रागिरी हिल्सको आइपीओमा आवेदकको संख्या प्रभू लाइफको भन्दा बढेर ११ लाखसम्म पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसैले, १८ करोड बराबरको आइपीओ मा ११ लाख आवेदकले १० कित्ताका दरले आवेदन दिदाँ जम्मा १ लाख ८० हजार आवेदकले मात्र कम्पनीको शेयर हात पार्ने देखिन्छ भने ९ लाख भन्दा धेरै आवेदकको हात खाली हुनेछ । जसकारण यस कम्पनीको आईपीओमा १० कित्ता शेयरका लागि मात्र आवेदन दिदाँ उपयुक्त देखिन्छ ।
कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
कम्पनीले आगामी २ आर्थिक वर्षमा नेटवर्थ १०९.२४ र १२२.०७ पुग्ने प्रक्षेपण गरको छ । यस अघि कम्पनीको नेटवर्थ ०७३/०७४ मा ९४.५२ ०७४र७५मा ९६.६३ ७५र७६ मा ९६/६९ र ७६/७७ मा ८४/८८ रहेको छ ।
यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा ४ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको यो कम्पनीले त्यसपछिका आगामी २ आर्थिक वर्षमा २३/५४ रुपैयाँ र ३२/८४ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा आउँदो वर्ष २०७८/७९ मा भने यस्तो नाफा बढेर ३६ करोड ११ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
कम्पनीले सञ्चालन मुनाफा पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८२ करोड १७ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुग्ने अनुमान गरेको छ । चालु वर्ष १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक हुने भनिएको जगेडा कोषको आकार आउँदो वर्ष भने १४ करोड १७ लाख रुपैयाँले धनात्मक हुने र आर्थिक वर्ष २०७९र८० बढेर ३३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बडिगार्डको सुरक्षा घेरामा पुष्प र साम्राज्ञी
“म हिंसाको कुरा गर्दिन तर शान्ति प्रक्रिया डिरेल हुन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ।” प्रचण्ड
आकाश र पूजाको य’स्तो ह’र्कत गरेको भिडियो बाहिरिए पछि त’ना’वमा (भिडियो)
“केपीलाई तह लाउन सकेनौँ” प्रचण्ड
“ओलीको एकमात्र मिशन मलाई सिध्याउने हो” प्रचण्ड
खुसिकाे खबर | कोरोना खोप आउदाेँ बिहीबार नेपाल ल्याइदै, यी मानिसले लगाउन पाउने
४४ जनाले १७ व’र्षीया कि’शो’रीलाई सा’मूहिक बला’त्कार
छिमेकी महिलासँग स’म्बन्ध राख्न यी युवकले बनाए सुरुङ, श्रीमानले थाहा पाएपछि…